पढ्ने समय:6मिनेट(Last Updated On: 19/08/2020)
यो प्रविधी-व्यावहारिक ज्ञानयुक्त मा, digital age connection is fast and furious. यसको लाभ सबै, हामी यात्रा र जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग संग जडान गुमाए, वर्तमान क्षण. रेल युरोप प्रेरित मार्फत यात्रा, सहज र रोमान्टिक छन्.
युरोप यात्रा मार्फत रेल भियना मा सुरु, अस्ट्रिया को राजधानी शहर. साहसिक पर्खिरहेका दुई महिमित दिन. बारोक streetscapes र इम्पेरियल महलों कलात्मक प्रदर्शन गर्न टोन सेट, वास्तु, सांस्कृतिक र सांगीतिक masterpieces. यो यसको ईर्ष्या गरे कफी-घर संस्कृति र जीवंत डिजाइन दृश्य सँगसँगै छ.
युरोप मार्फत तपाईंको रेल जारी, अस्ट्रिया गरेको सल्जबर्ग शहर मा एक दिन खर्च. यो जर्मनी को सीमा मा छ र छ शानदार दृश्य पूर्वी आल्प्स को. ख्याति कमाउने सल्जबर्ग दाबी संसारको सबैभन्दा ठूलो संगीतकार लागि घर एक पटक थियो कि एक कहानी-किताब शहर भइरहेको छ, Mozart.
पहाडलाई सल्जबर्ग जीवित छन्. यसलाई एक पटक अत्यधिक प्रशंसित लागि फिलिम स्थान रूपमा प्रयोग भएको थियो, 'संगीत को ध्वनि' र त्यहाँ कलात्मक सिर्जनाको एक palpable अर्थमा छ. यो पनि एक शान्त Serenity exudes.
म्यूनिख र यसको Bavarian सम्पदाको जहाँ बियर र मदिरा परम्परा आफ्नो संस्कृति को एक अभिन्न भाग गठन गरेको छ छन्, लगभग सात शताब्दीयौंदेखि. को Oktoberfest म्यूनिख सूची को शीर्ष मा छ. यो लाखौं मानिसहरू द्वारा मनाइन्छ भन्ने विश्व भर देखि यात्रा, को पर्वहरू मा भाग गर्न.
स्ट्रासबर्ग एक मध्ययुगीन भूत र एक प्रगतिशील भविष्य बीच शेष. यसको गोथिक गिरजाघर छ एक वास्तुकला आश्चर्य and roaming through the old town’s twisting alleys and enjoying tavern food comes highly recommended.
पेरिस एफिल टावर सहित यसको प्रतिष्ठित संरचनासँग सानो परिचय आवश्यक छ, चाप डी ट्रायोम्फे, र Notre Dame गिरजाघर. पेरिसियन शब्द शैली संग र राम्रो कारण लागि पर्याय छ. आशा विश्व-वर्ग भोजन, किनमेल, र ग्यालरीमा जो प्रेरणा र परम आनन्द को एक कहिल्यै-अन्त्य स्रोत हो. युरोप मा सबै भन्दा राम्रो रेल यात्राको सधैं यो प्रसिद्ध शहर समावेश गरिनेछ.
एम्स्टर्डम ऐतिहासिक नहरहरुमा साथ क्रूज जहाँ छ, जो साधारण छ, र टहलने संग्रहालयहरु मार्फत र पुराना-भरिएको पसलहरूमा. पिउने, भोजन र डिजाइन दृश्य enthrall र Entertain. एम्स्टर्डम आश्चर्य को एक शहर हो र भ्यान Gogh संग्रहालय घर साथै प्रदर्शनमा अन्य सम्पत्तिहरू को होस्ट छ.
बर्लिन विसर्जन तीन दिन आवश्यक हुनेछ. बर्लिन 'कहिल्यै सोता भन्ने शहर' को भएकोमा एक प्रतिष्ठा छ. यसको vibrancy फाइदा लिन! रात revelry लागि हो र दिन सांस्कृतिक कुराहरूलाई लागि हो.
युरोप मा रेल यात्रा प्राग समाप्त, आश्चर्य को एक whirlwind पछि. प्राग spiers शहर छ र अक्सर पेरिस को सौन्दर्य तुलना गरिएको छ. यो पनि युरोप गरेको सर्वश्रेष्ठ बियर गर्न हुनुको घर रूपमा वर्णन गर्नुपर्छ. एक को अमरीकी आनन्द 14th शताब्दीमा ढुङ्गा पुल, एक पहाडको शिरमा रहेको होटलबाट महल र अल्छी नदी. यो युरोप मार्फत एक रेल यात्रा समाप्त गर्न सही तरिका हो.
युरोप मा सबै भन्दा राम्रो रेल यात्राको पक्का आराम गर्दै छन् बनाउन र विश्राम हुनेछ. बाटो साथ दृश्यहरु मोल, रेल द्वारा यात्रा र सकेसम्म धेरै ठाँउहरु रूपमा squeezing को सुरक्षा. त्यहाँ यात्रा गर्न कुनै राम्रो तरिका हो. सँग पुस्तक एक ट्रेन सेव आज!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “रेल मा युरोपेली विशेषताहरू3सप्ताह” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feuropean-highlights-by-train%2F%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#traveleurope EcoFriendlyTravel EuropeanHighlights europetravel रेल यात्रा